ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: February 2009
ကျုပ်နာမည် လှဝင်း … လူပျိုကြီး မောင်လှဝင်းပေါ့ … ကျုပ်ကတစ်ဦးတည်းသောသား …... ကျုပ်ညီ၊ညီမတစ်ဝမ်းကွဲတွေကတော့ ကျုပ်ကို “ကိုကိုကြီး” လို့ခေါ်ကြတယ် … ခေါ်ဆိုကျုပ်ကတစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမတွေကြားမှာ အကြီးဆုံးပဲလေ ….ကျုပ်ကို လူတွေက နဲနဲလွတ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ် …… ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်တော့ အကောင်းထင်တာပဲ …ကြည့်လေ … ကျုပ်က အစိုးရရုံးတစ်ရုံးမှာ စာရေးအလုပ်လုပ်နေတာ … ကျုပ်သာလွတ်နေကြည့်ပါလား … ကျုပ်ကို အလုပ်ခန့်မလား … ဝေးပါသေးတယ်လေ ….အဲ့ဒီတော့ လူတွေက ဘာပြောတယ်မှတ်သလဲ “ယဉ်ယဉ်လေး မို့လို့ပါကွာ” တဲ့ … တတ်လဲ တတ်နိုင်ကြပါပေ့ ….
ကျုပ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ် … ကျုပ်မှာ မုဆိုးမ အမေကြီးရှိတယ် …ကျုပ်က ဗုဒ္ဓဟူးသား၊ အမေက စနေသမီး …. ကျုပ်အမေက အမွေရထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေး လူငှားတင်ထားတော့ သားအမိနှစ်ယောက်စာ မပူရဘူးလေ .. ဒါကို ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာပြောတယ်မှတ်သလဲ “စနေ၊ဗုဒ္ဓဟူးမို့ ရူးတာတောင်မဆင်းရဲတာ” တဲ့လေ ..
တကယ်ပြောတာပါ ကျုပ်က လူကောင်းဗျ ….. တခါတလေ စိတ်ထဲရှိတာလေးပဲလုပ်တတ်တာပါ …. ဟိုတစ်နေ့ကအကြောင်းပြောပြဦးမယ် ….ကျုပ်အလုပ်ကပြန်လာတော့ ကားမစီးချင်လို့ လမ်းလျှောက်ပြန်တယ် … ကန်တော်ကြီးဘက်ကို ပတ်ပြီးပြန်တာဗျ … ရှုခင်းလေးလဲကောင်း၊ လေကောင်းလေသန့်လဲရ … ကျုပ်အတွေးနဲ့ကျုပ်အဟုတ်ဗျ …..ကန်ကြီးဘေးရောက်တော့ ကျုပ်စိတ်ထဲ ရေထဲဆင်းစိမ်ချင်လိုက်တာဗျာ … ဒါနဲ့ကျုပ်လဲ ၀တ်ထားတဲ့ ပုဆိုးရယ်၊ အင်္ကျီရယ်ကို ချွတ်ပြီး ကျုပ်ရဲ့လွယ်အိတ်လေးထဲထည့် ထမင်းဗူးလေးဘေးချပြီး ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ရေထဲဆင်းပါရောလား … နေလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ အေးနေတာပဲ …. ရေစိမ်လို့ဝတော့ ကမ်းပေါ်ပြန်တက်လာတာပေါ့ ….. ကျုပ်ချထားခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဗျ … တစ်ကောင်ကောင်ဖြောင်သွားတာနေမယ် … ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ … ကျုပ်ပဲသိတယ်မဟုတ်လား …. အဲ့ဒီနားရှိတဲ့အပင်တွေက အရွက်ခပ်ကြီးကြီးတွေရွေးပြီး တွေ့ရာကြိုးနဲ့သီ … ခါးမှာပတ်ပြီးပြန်တာပေါ့ …. လူတွေက ကျုပ်ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီး တီးတိုးပြောကြတယ် … ရယ်မောကြတယ် … ကျုပ်သိပါတယ် “ဒီလူ အရူးနေမယ်” လို့ပြောနေကြတာနေမှာပေါ့ … ကျုပ်က လူမြင်ကောင်းအောင်လဲ လုပ်လာရသေးတယ် …. လူတွေ လူတွေ ခက်တယ်ဗျာ ….. အဲ့ဒါကြောင့် ကျုပ်လူတွေကိုကြည့်မရတာဗျ ….
အားနေ သူများကိစ္စပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတယ် ….
နောက်တစ်ရက်ကျတော့လဲ ထမင်းစားတာ ဟင်းချိုမပါလို့ အမေ့ကိုဂျီကျပြီး ပန်းကန်ထဲရေတွေလောင်းထည့်ပြီးစားမိပါတယ် … အမေကြည့်ပုံက တစ်မျိုးဗျ ….ကျုပ်အမေ ကျုပ်ကိုအဲ့လိုတခါမှမကြည့်ဖူးဘူး ဗျာ …. အမေ့မျက်လုံးထဲက အရိပ်တွေကြည့်ပြီး ကျုပ်စိတ်မကောင်းတောင်နည်းနည်းဖြစ်သွားပြီ …. အမေကပါ ကျုပ်ကို အရူးလို့ ထင်နေပြီလားဗျာ …..
ဒီနေ့ ကျုပ်စိတ်တွေအရမ်းရှုပ်နေတယ် … အလုပ်မှာလဲ လူကြီးက ငေါက်တာခံရသေးတယ် … အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲ အင်္ကျီဝတ်ကြီးနဲ့ရေချိုးလို့ဆိုပြီး အမေက ထပ်ဆူသေးတယ် … စိတ်ရှုပ်တယ်ဗျာ … ကျုပ်စိတ်တွေအရမ်းတိုလာပြီ … ကျုပ်အထက်လူကြီးကိုလဲ မကျေနပ်ဘူးဗျာ … ကျုပ်စိတ်တွေကိုထွက်ပေါက်ပေးချင်တယ် …. ကျုပ် တံခါးနားကို ပြေးသွားပြီး သံပန်းတံခါးကို ၀ုန်းဒိုင်းကြဲနေအောင် ဆွဲခါရမ်းနေမိတယ် … မရသေးဘူး … စိတ်မပြေသေးဘူး … ကျုပ် ၀ရန်တာကို ထွက်လိုက်တယ် …. ကျုပ်ပါးစပ်ကလေ ဖရုဿဝါစာတွေ အကျယ်ကြီးပဲ ….. အော်ဟစ် ဆဲဆိုပစ်လိုက်တယ် …. ကျုပ်နေသာထိုင်သာ နည်းနည်းရှိသွားပြီ …. အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီး လှဲလိုက်ဦးမယ်ဗျာ …. အလိုကျုပ်ရှိနေတဲ့ ၀ရန်တာကို သော့ခတ်ထားပါလား …. ပြီးတော့ ဆေးထိုးအပ်ကိုင်ထားတဲ့ အိမ်နီးချင်းဆရာဝန် …. ကျုပ်ရဲ့ ဦးလေးတွေရော ရောက်နေပါလား …. ရောက်ဆို ကျုပ်တို့အမျိုးတွေက ကန်ထရိုက်တိုက် တစ်လုံးမှာ စုနေကြတာလေ … ဘာတွေလဲ …. ကျုပ်စိတ်ပြန်ရှုပ်လာပြန်ပြီ …. ၀ရန်တာတံခါးကို ကျုပ်ကိုယ်နဲ့ပစ်တိုက်ပစ်တယ် …. ကျုပ်ဦးလေး အငယ်က “ဟေ့ရောင် ဖိုးလှဝင်း စိတ်ကိုထိန်းကွာ” တဲ့ … ကျုပ်ဘာမှမှမဖြစ်တာ သူတို့လုပ်ပုံလဲကြည့်ဦးဗျာ … ကျုပ်ကိုဝိုင်းချုပ်ကြတယ် …. ချုပ်သာချုပ်ကြတာ ကျုပ်အရပ်က ၆ ပေအတိ၊ သူတို့က ကျုပ် ချိုင်းလောက်ပဲရှိကြတာ … ကျုပ်လဲ အတင်းရုန်းတာပေါ့ … ဆရာဝန်ကလဲ ဆေးထိုးအပ် တကဲကဲနဲ့ … ထိုးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ ….
ကျုပ် အိပ်ယာနိုးလာပြီ ….. “အမေရေ .. ကျုပ်ဗိုက်ဆာပြီ” ….
ဟင် … အမေဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်? … ကျုပ်ရော ဘယ်ရောက်နေတာပါလိမ့်? …..
ကျုပ် …. ကျုပ် ထောင်ထဲမှာပါလား …. အမေ … အမေရော …. ကျုပ်အော်ဟစ်မိပြန်ပြီ ….
ဆဲဆိုမိပြန်ပြီ…. ကျုပ်ကိုလာတားတဲ့သူတွေကို ကျုပ်ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်တယ် … ကျုပ်ကို ဘယ်သူမှ လာမထိကြနဲ့ဗျာ …. အမေ … အမေရေ … ကျုပ်ကို သူတို့ရိုက်တယ်ဗျာ …. ကျုပ်က ကြမ်းလွန်းလို့တဲ့လေ …. ကျုပ်အကောင်းပါဗျာ …
ကျုပ် မရူးပါဘူး ….. အမေရေ … ကျုပ်ကိုပြန်လာခေါ်လှည့်ပါဗျာ ……………….
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:15 AM 8 comments Links to this post
ကျွန်မဘလော့ကို အမြဲဖတ်လေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ် … စာအသစ်မတင်လို့တဲ့လေ … အသစ်မတင်တာ လာဖတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို မလေးစားတာတဲ့ … အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မက “မဟုတ်ပါဘူးဟယ် … ဘလော့ဆိုတာ ရေးချင်တိုင်းရေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး … ဖီလင်လဲလာမှ အားချိန်လဲရှိမှ” လို့ပြန်ရှင်းပြမိပါတယ် …
ကျွန်မလည်းအနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ပို့စ်တော့ တင်ချင်တာပေါ့ … ခုတလော ဘလော့လည်ဖတ်လို့မရအောင်ကို အလုပ်တွေကမပြီး … အလုပ်ကြွေးတွေက တစ်ဘက်၊ စိတ်ညစ်ညူးမှုတွေကတစ်ဘက်နဲ့ တော်တော် ကသိကအောင့်ဖြစ်နေမိပါတယ် …
မနေ့ကတော့ အတူနေသူငယ်ချင်းရဲ့မွေးနေ့အတွက် အိမ်မှာ နန်းကြီးသုပ် လုပ်စားကြတယ် … ကျွန်မတို့ ငယ်သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ရယ် ကြီးသူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ရယ် စုပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ၊ စကားတွေပြောကြနဲ့ မနေ့ကတော့ တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ် ..
စီဘောက်စ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေပြောထားတဲ့ နေကောင်းလား၊ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ၊ ပို့စ်အသစ်မတင်ဘူးလား စတာတွေဖတ်မိရင် စိတ်က စာရေးချင်တယ် … တခုခုပေါ့ … ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးချင်တယ် … ဟူး …. ကျွန်မတကယ်ကို စိတ်ရှုပ်နေတာပါ ….း(
စိတ်ကျနေတာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါရဲ့  …. အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေသွားပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ … ကျွန်မပို့စ်တွေမတင်ဖြစ်ရင် စိတ်မရှိကြပါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ …
ကျွန်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရင်လေ ကျွန်မလိုပဲ စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုး ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေမကြုံပါစေနဲ့လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးဖြစ်တယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:42 AM 10 comments Links to this post
သို့ ... လူကြီးများ
အလုပ်တွေအများကြီးပေးထားတဲ့ကြားက နောက်ထပ်အလုပ်တွေ အလုပ်တွေထပ်ထပ်လုပ်ခိုင်းတယ် ...
ဒီအလုပ်မှာက မြန်မာချည်းပဲ ၉ ယောက်ရှိတယ် ... မြန်မာတွေကို အသေခိုင်းတယ် ... ကိုယ်လုပ်ပေးလေ ပိုခိုင်းလေပဲ ... ဒီနေ့လဲ မန်နေဂျာကြီးက မေးလ်ပို့ပြီး Force လုပ်ပြန်တယ် ... ပြန်ပြောပြန်ရင်လည်းမကြိုက် ...
ပရောဂျက်ကလည်း Dead Line ကကျော်နေတာမှ ရက်ပိုင်းမဟုတ်ဘူး တစ်နှစ်ကြီးများတောင် ... ကိုယ်ရွှေမြန်မာတွေ ကံကောင်းလိုက်ပုံများ လူအမျိုးမျိုး၊ မန်နေဂျာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့ ဒီအရှုပ်ထုတ် ပရောဂျက်က ကိုယ်တွေအလုပ်ဝင်ချိန်မှပဲ တည်မြဲတော့တယ် ... ရှေ့ကဖားတွေ၊ ငရုတ်သီးတွေ ဖွခဲ့သမျှ ခေါင်းပေါ်လုံးလုံးကျလို့ မဟုတ်တာဖြစ်ရင် မြန်မာတွေ ဆိုတာချည်းဆိုတော့ နည်းနည်းချဉ်လာတာနဲ့ ဒီကဗျာရေးလိုက်တာ ...
“သို့ ... လူကြီးများ”
ခိုင်းလိုက်တဲ့ Multi-tasking ….
ထောင်းမဟဲ့ ဆိုတာချည်း ….
“အိုကွယ် … မှားပါဘိ” လို့
Posted by ကြယ်ပြာ at 2:35 AM 12 comments Links to this post
ကျွန်မက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ကို အကုန်လျှောက်စိတ်ဝင်စားတတ်တာလေ …
ကျွန်မ ကြီးဒေါ်ကပြောတယ် “ညည်းအေ … ဘယ်လောက်များ စပ်စုသလဲဆိုရင် မွေးကင်းစ အနှီးလေးခေါင်းအုပ်ပြီး ဆေးရုံကဆင်းခါက ရက်သားလေးပဲရှိသေးတယ် … အိမ်ရောက်တော့ … အိုး … ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခေါင်းလည်အောင် လိုက်ကြည့်တာ ခေါင်းပေါ်အုပ်ထားတဲ့အနှီးလေးတောင် ပြေကျတယ်” ဆိုပဲ … ကြီးဒေါ်ကပြောတာနော် … ကျွန်မတော့ မသိဘူးရယ် … မှတ်လဲမမှတ်မိပါဘူး …. နည်းနည်းတော့အပိုပြောသလားထင်မိတယ် … ဒီလောက် ကလေးငယ်ငယ်လေးက ခေါင်းကိုတောင်လှည့်တတ်သေးရဲ့လားမသိပါဘူး …
ခုတလောလဲ ဘာရယ်မဟုတ် ငယ်ငယ်တုန်းကစပ်စုမိတာလေးတွေ လျှောက်ရေးချင်စိတ်ပေါက်နေမိတယ် … ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့အိမ်နောက်ဘက် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းက နတ်ဝင်သည် ဒေါ်ကြည်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး နတ်ဘယ်လိုဝင်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်စိတ်လေးပေါက်လာတယ် ….
ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်ဘက်မှာ နောက်ဖေးလမ်းကြားလေးပဲခြားပြီး ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းခပ်သေးသေးတစ်ခုရှိတယ် …
အဲ့ဒီ ဘုရားကျောင်းမှာ အမေကြီးရယ်၊ သမီး(၃)ယောက်ရယ် ဘုရားကျောင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့နေကြတယ် … သမီးတွေဆိုတာ ဒေါ်ကြည်အပါအ၀င်ပေါ့ … အသက်တွေကတော့ ခုဆိုရင် ၅၀ နဲ့အထက်တွေဖြစ်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့ … အတိအကျတော့မသိဘူးရယ် …
ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် အဲ့ဒီကို ခဏခဏသွားတယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ နွေရာသီဆိုရင် အပြင်မှာပူပြီး ဘုရားကျောင်းထဲမှာနေရတာအေးတယ်လေ …. ပြီးတော့ အဲ့ထဲမှာ ရုပ်ထုတွေ အများကြီးဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ .. အဓိကရုပ်ထုကတော့ ကာလီမယ်တော်ရုပ်ထုပါ …. လက်အများကြီးနဲ့ကာလီမယ်တော်ရုပ်ထုကို ဘုရားကျောင်းရဲ့ အတွင်းခန်းမှာထားတယ် … အခန်းထဲမှာက မယ်တော်ရုပ်ထုရယ်၊ ရုပ်ထုရှေ့က ပန်းအိုးတွေရယ်ပြီးရင် သောက်ရေခွက်တွေထည့်ထားတဲ့စတီးလင်ဗန်းတစ်ချပ်ရယ် … ကန်တော့ပွဲတင်တဲ့ စားပွဲရယ်အပြင် လူနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်စာလောက်ရှိတဲ့ နေရာခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးရယ် ရှိတယ် …
ကန်တော့ပွဲတွေကလဲ စားပွဲအပြည့်ပါပဲ … မယ်တော်ရုပ်ထုမှာလဲ စံပယ်ပန်းတွေပြည့်နေတာပေါ့ … ထိုင်လျက်မယ်တော်ရုပ်ထုမှာ စံပယ်ပန်းတွေဘယ်တောင်လှုထားကြသလဲဆိုရင် စံပယ်ပန်းအပုံကြီးပေါ်မှာ မယ်တော့်ခေါင်းလေးတင်ထားသလိုလေးတောင်ဖြစ်နေတယ် …. ပြီးတော့ ဘုရားကျောင်းရှေ့က ဖြတ်သွားဖြတ်လာ အချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလဲ ဘုရားသာမှန်မှန်ရှိခိုးချင်မှရှိခိုးမယ် … ဘုရားကျောင်းရှေ့များရောက်ရင် ကာလီမယ်တော်ကို မတ်တပ်လေးရပ် လက်အုပ်လေးချီပြီး ကန်တော့လေ့ရှိကြတယ် … ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ် … “မယ်တော်ရယ် မစပါ … ဒီတစ်ခါပေါက်ရင် ပွဲလာပေးပါ့မယ်” တဲ့ … အဲ့ဒီအချိန်က ချဲထီထိုးတဲ့ခေတ် …. ဂဏန်းရဖို့ ပေးလိုက်တဲ့ကန်တော့ပွဲတွေ …
ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒီရှေ့သွားဆော့နေကြဆိုတော့ လာသမျှအကုန်မြင်၊ ပြောသမျှအကုန်ကြားတာပေါ့လေ …
ဆက်ပြောရရင်အဲ့ဒီအတွင်းခန်းကို လူတိုင်းပေးမ၀င်ဘူးလေ. .. အမျိုးသမီးဆိုရင် သန့်မှပေးဝင်တယ် … ဟိုဟာဒီဟာဖြစ်နေရင် မသန့်ဘူးလို့ယူဆပြီးပေးမ၀င်ဘူး … နတ်ဝင်ပြီဆိုရင် ကျွန်မက အတွင်းခန်းအ၀ ထိ ကပ်ပြီးတိုးကြည့်ချင်လေ့ရှိတယ် … များသောအားဖြင့် ပေးမ၀င်ဘူး .. နေ့တစ်နေ့ကပေါ့ နတ်ဝင်သည် ဒေါ်ကြည်လဲ စိတ်မကြည်လင်ဘူးထင်ပါရဲ့ မနက်ကတော့ ညီအစ်မတွေရန်ဖြစ်သံတွေကြားရတယ် .. ဆဲကြတာလဲ မိုးကိုမွှန်နေတာပဲ …
ညနေဆိုရင်တော့ အိနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ပေါ့ …. အဲ့ဒီနေ့က နတ်မေးသူတွေများတဲ့နေ့ … ကျွန်မလဲ ရောယောင်ပြီး အတွင်းခန်းကိုလိုက်ဝင်တဲ့နေ့ပေါ့ ..
အစ်မကြီးတစ်ယောက်အလုပ်လိုချင်လို့တဲ့ အလုပ်ရနိုင်၊ မရနိုင်ဆိုတာကို နတ်လာမေးတာပါ …..
သူက ကာလီမယ်တော်ကိုလှုဖို့ သံပရာသီး ၃ လုံးယူလာတယ် … ဒါလဲ ဒေါ်ကြည့်အစီအရင်ပေါ့ …
သံပုရာသီး(၃)လုံးကို တင်စရာနေရာမရှိတော့တဲ့ စံပယ်ပန်းပုံပေါ်က ကာလီမယ်တော်လက်နေရာကိုမှန်းပြီး ဒေါ်ကြည်ကတင်လိုက်ပါတယ် … နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင် … ပြီးတော့အစ်မကြီးလက်ကို ဒေါ်ကြည်ကထိလိုက်တယ် … နောက်ပန်းအိုးထဲက သပြေခက်ကိုယူပြီး လက်နှစ်ဘက်ပူးပြီး နဖူးကိုရိုက်တော့တာပါပဲ … တအောင့်လောက်ကြာတော့ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု့ရယ်၊ ခုံကိုဒူးနဲ့တိုက်မှု့ရယ်ပေါင်းပြီး သံပုရာသီးတစ်လုံးက အောက်က စတီးလင်ဗန်းပေါ်ပြုတ်ကျပါလေရောလား … စတီးဗန်းကလဲ အပါးစားဆိုတော့ အသံက အကျယ်ကြီးမြည်တာပေါ့ … ကျွန်မတင်လန့်သွားသလားမှတ်တယ် နတ်ဝင်နေတဲ့ဒေါ်ကြည်ပါလန့်ပြီးတုန်သွားတာကို သူ့မျက်နှာကိုသေချာစိုက်ကြည့်ပြီး တကယ်ဝင်၊မ၀င် အကဲခတ်နေတဲ့ ကျွန်မကတော့သိလိုက်တယ် … သူများတွေကတော့ မျက်စိမှိတ်အာရုံပြုနေတာဆိုတော့ မသိလိုက်ဘူးရယ် … ချက်ခြင်းပဲ သူက သံပုရာသီးကိုကောက်ယူပြီး ဟိုအစ်မကြီးကို “ရော့ … ယူသွား အလုပ်ရမှာကျိန်းသေးတယ် … မယ်တော်က ကပ်ထားတဲ့သံပုရာသီး ပြန်စွန့်လိုက်တယ် ဆောင်ထား ” တဲ့ ….. ကျွန်မကတော့တော့ ရယ်ချင်ပက်ကျိနဲ့ပဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ် ….
ဟော …. လာပြန်ပြီ နောက်တစ်ယောက် ….
ဒါက အမျိုးသား …. သူနဲ့ကျတော့ သပြေပန်းကိုမသုံးတော့ဘူး … လက်တစ်ဝါးစာကျော်ကျော်ခက်ရင်းခွရဲ့(ဟို ငရဲသားတွေကိုင်တဲ့ဟာလိုမျိုး) အရိုးတံကို နှစ်ယောက်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကြတယ် … … ပြီးလဲပြီးရော …
ပူးပါလေရော … ဘယ်လိုပုံဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ လူနှစ်ယောက် တုတ်တစ်ချောင်းကိုလုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ … အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ … သူက သပြေပန်းနဲ့အထာကျနေသူလေ …. နဖူးထိအောင်ရိုက်တာ ဘာပြဿနာရှိမှာတုန်းနော် …. ခုတော့ ခက်ရင်းခွဆိုတော့ ကျွန်မလို ကလေးတစ်ယောက်တောင် နဖူးထိတော့မယ် ဆိုတာ သိနေတယ် … သူတို့က ဇွတ်. …..
အတင်းကို အားနဲ့မာန်နဲ့ပူးတော့ နဖူးကိုစိုက်တာပေါ့ …. ဒုတ်ကနဲပဲ … သွေးတွေကလဲ ဖြာကနဲပဲ …. ဟော ….. နတ်ဝင်သည် မှားတော့ အနှောက်အယှက်ရှိတယ်တဲ့ …. ဘယ်သူမသန့်ပဲ အတွင်းခန်းဝင်သလဲတဲ့ …. ဒုက္ခ …..
ကဲ …. ဘယ်လိုများစစ်ကြမတုန်း အရပ်ကတို့ရယ် …. အကုန်ထွက်ဆိုပြီး မောင်းထုတ်ပါလေရောလား ….
ကျွန်မပါထွက်ရတော့တာပေါ့ …. စိတ်ထဲမှာတော့ “အော … ဒေါ်ကြည်နတ်ဝင်တာဒီလိုကိုး” ဆိုပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေ့ကိုပြန်ပြောပြပြီး သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေမိတယ် ….
ခုမှပြန်တွေးကြည့်မိတာပါ … “အလိမ်ခံချင်သူတွေရှိလို့ လိမ်တဲ့သူတွေရှိနေတာ” ဆိုတဲ့ အတွေးလေးလဲ ပေါ်လာမိတယ် …
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … ဒေါ်ကြည်နတ်ဝင်တာ ကျွန်မအတွက် ပို့စ်တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 10:39 PM7comments Links to this post
စိတ်တွေ မှုန်မှိုင်း အုံ့ဆိုင်းနေခဲ့တာ
ရက်သတ္တ တစ်ပတ်လောက်တောင်ရှိရော့မယ် …
ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်း ပြန်ပြန်ရှုပ်နေတာလဲ အခါခါပဲ …
ကဲ …. ဘယ်မှာလဲ ငါ့ရဲ့ ရင်ဖွင့်ရာ ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:19 PM 8 comments Links to this post
မပြန်ခင်တစ်ညအလိုက မုဆိုးတောင်ဘက်သွားတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေရှိတဲ့ဘက်ရဲ့စောင်းတန်းမှာ နတ်ကနားပေးဖို့ လမ်းပြည့်လုနီးပါးထိုးထားတဲ့ မဏ္ဍပ် ကိုသွား ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် …
မဏ္ဍပ်က ၀င်ပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိပါတယ် … အဲ့ဒီအပေါက်က နတ်ဝင်သူတွေလာဖို့ ပိတ်မရပ်ရဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် … မဏ္ဍပ်က ဆိုင်းတွေ၊ဘုံတွေတီးနေပါပြီ … ကျွန်မ အဲ့ဒီနတ်ဝင်ပေါက်နားကကပ်ပြီး ရပ်ကြည့်နေမိတယ် … အထဲမှာကနေတဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ရောက်နှင့်နေပါပြီ … ဆိုင်းဝိုင်းကြီးဘေးမှာ မိုက်တစ်လုံးနဲ့ကြေငြာသူတစ်ယောက်ရှိပါတယ် … သူက အခုကုလားနတ်ကိုချော့ဖို့အလှည့်ကျလို့ ရပ်ကြည့်နေသူတွေထဲကလိပ်ပြာတူသူတွေလာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တဲ့ …. ဘယ်သူများလာမလဲလို့ ကျွန်မစောင့်ကြည့်နေမိပါတယ် … သူတို့က ၀င်မလာမချင်း ဖလားထဲမှာရေထည့်ပြီး သပြေခက်နဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကရပ်ကြည့်နေသူတွေကိုလိုက်ဖြန်းပါတယ် … ဒါမှ လိပ်ပြာတူသူပေါ်လာမယ်ပေါ့ … အဲ့ဒီအချိန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကျွန်မကို ၀င်တိုက်ပြီး ယိုင်တိ ယိုင်ထိုးနဲ့ဝင်လာပြီး ကပါတော့တယ် ။ အဲ့ဒီမှာ အထဲက နတ်ထိန်းခေါ်မလား အဘွားကြီးနှစ်ယောက်က ၀င်လာသူရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ ပုဝါအနီစည်းပေးပါတယ် … ပြီးတော့လက်ထဲကို အမွှေးတိုင်တွေထည့်ပေးပါတယ် ... အမွှေးတိုင်တွေကိုင်ရင်းကတာ ကံကောင်းလို့အချင်းချင်းမထိုးမိတယ် ... အကကတော့မရပ်ပါဘူး … တီးလုံးက ကုလားတီးလုံးပါ … ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ ကတာ အိန္ဒိယကားတွေထဲကလို မလှဘူးလို့ တွေးနေမိပါတယ် …. ပူးရင်းနဲ့ ဆိုင်းလဲအချ လူကလဲပုံကျသွားပါတယ် … မောသွားပုံပါပဲ …
နောက်တစ်ကျော့အတွက် ခုနကလို လူထပ်ခေါ်ပါတယ် ..တော်တော်နဲ့ပေါ်မလာပါဘူး .. နောက်တော့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ် … သူလဲခုနကနတ်ကိုချော့ဖို့ပါပဲ … ကျွန်မလဲဘာမှသိပ်မထူးခြားလို့ ဆက်မကြည့်တော့ပဲ ခေါက်မုန့်စားမယ်ဆိုပြီး ခေါက်မုန့်ဆိုင်ကိုသွားပါတယ် … ခေါက်မုန့်ဆိုင်ဘေးကဘိနပ်အပ်တဲ့နေရာမှာ ထိုင်နေတဲ့ကလေးမလေးက ထိုင်နေရင်းနဲ့ လက်ဝါးနှစ်ဘက်ပူးပြီး နဖူးကိုရိုက်ပါတော့တယ်… ပြီးလဲ ပြီးရော ပူးရင်းနဲ့ မဏ္ဍပ်ကိုတောက်လျှောက်ပြေးသွားပါတော့တယ် … ခေါက်မုန့်ဆိုင်က ကောင်မလေးက “ဟယ် … သူလဲပူးနေပြီ၊ သားအမိနှစ်ယောက်လုံး တကယ်ပူးတာလားတော့မသိဘူး” တဲ့ ….ဒီတော့မှ ပထမပူးသူနဲ့ ဒီကလေးမ သားအမိမှန်းသိတော့တယ် … ဘုရားဖူးတွေထဲက ရပ်ကြည့်နေရင်းနဲ့ ပူးသလိုဖြစ်တာ နှစ်ယောက်လောက်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ် … သူတို့ကိုတော့အတူပါလာသူ တွေက ရှက်လို့ထင်ရဲ့ ပေးမကပဲ အတင်းပြန်ဆွဲခေါ်ကြပါတယ် … အဲ့ဒီတော့ မိုက်သမားက ဒါ နတ်ပွဲကိုနှောက်ယှက်သလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ … တကယ်လို့ လိပ်ပြာတူတဲ့သူပါရင် ဆွဲမထားကြပါနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ကြပါလို့ပြောပါတယ် …ကျွန်မကြည့်ခဲ့တဲ့ လူလေးယောက်မှာ လေးယောက်လုံးက အဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကဈေးသည်တွေပါပဲ … တကယ်ပူးလား၊ မပူးလားတော့ ကျွန်မ မသိပါဘူး … မဏ္ဍပ်ကပြန်လာတော့ ကျွန်မအတွေးထဲမှာ နတ်ပူးတာ ဘာလို့မျက်စိဖွင့်ပြီးမပူးကြတာလဲ ?
ပူးတဲ့သူတွေက အဲ့နားတစ်ဝိုက်ကလူတွေပဲဘာလို့ဖြစ်နေကြရတာလဲ ?
ပူးသလိုဖြစ်တဲ့သူတွေကရော ဘယ်လိုများဖြစ်သွားတာလဲ ?
၀င်လာတုန်းကတော့ မတ်တပ်ကြီးဝင်လာပြီး ဆိုင်းလဲချရော ဘာလို့ပုံလဲသွားတာလဲ (အရမ်းခုန်ပြီးကတာလဲမဟုတ်ပါဘူး) ?
ပုံလဲပြီး ခဏလဲနေရော ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှမကြည့်ပဲဘာလို့ထွက်သွားတာလဲ?
အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ကျွန်မ သုံးထပ်ဆောင်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်လာခဲ့မှန်းတောင်မသိပါဘူး …..
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:43 PM9comments Links to this post
Strictly NO Myanmar
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို့ပေးတဲ့ပုံပါ... Strictly NO Myanmar လို့ဘာကြောင့်ရေးသလဲတော့ကျွန်မ မသိပေမယ့် စိတ်ထဲမကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ် ... ဘယ်မြန်မာတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအမှားမျိုးများလုပ်မိလို့ ဒီလိုမြန်မာနဲ့ချီပြီးရေးသလဲဆိုတာသိချင်မိတယ် ... အိုင်တီမှာ မြန်မာတွေမညံ့ကြဘူးလို့ထင်ပါတယ် ... တစ်နေရာက တစ်နေရာ ခုန်တာများတာတော့ရှိပါတယ် .... အများစုကတော့ လစာနှိမ်လို့ (သို့) ပိုရတဲ့နေရာပြောင်းချင်လို့ပါ ... နှစ်ဘက်စလုံးမှားတာရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုကြောငြာခံရခြင်းဟာ Company ဘက်ကယူဆတဲ့ မကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ မြန်မာအများစုထိခိုက်၊နစ်နာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:01 PM3comments Links to this post
ကျိုက်ထီးရိုးသို့အလည်တစ်ခေါက် ( ၁၅ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉)
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ပုံကို http://www.myanmarvoyages.com မှယူထားပါတယ်။
ရန်ကုန်ကပြန်လာပြီးကတည်းက ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိ စာရေးဖို့ကို စိတ်ကသိပ်မပါဘူးဖြစ်နေတယ် …. အဲ့ဒီတော့ ဘလော့တွေပဲလိုက်လည်ပြီးဖတ်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ … ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းကအကြောင်းလေးရေးမယ် စိတ်ကူးထားတာပြန်လာကတည်းကပဲ .. ခုမှပဲရေးဖြစ်တော့တယ် …
ကျွန်မတို့ရဲ့ခရီးလေးကို ရွှေအိုးစည်ကားနဲ့စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ည ၉ နာရီမတိုင်ခင် စုရပ်နေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြေနီကုန်း ရိုးမဘဏ်ရှေ့ကို ကျွန်မတို့တွေ အနည်းငယ်စောပြီးရောက်နေခဲ့ကြတယ်။ တခြားကားတွေနဲ့သွားမယ့်သူတွေလည်း တဖွဲဖွဲရောက်လာကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ဘေးကတစ်ဖွဲ့ဆို ဆူညံနေပြီး သူတို့ကိုကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက သူတို့အထုပ်တွေ စုပုံချပြီး စလိုက်၊ နောက်လိုက်လုပ်နေကြပြီး၊ ကားပေါ်တက်ခါနီးအထုပ်စစ်တော့မှ တစ်ထုပ်ပျောက်နေတာတွေ့ပါတယ် … မျက်စိရှေ့တင်ဘယ်လိုက ဘယ်လိုသုတ်သွားမှန်းမသိလိုက်ပါဘူး ….
ကျွန်မတို့စီးမည့်ကားက ၉ နာရီ ၃၀ လောက်မှရောက်လာပါတယ်။ လက်မှတ်ဝယ်တုန်းကတော့ ခုံနံပါတ်တွေဘာတွေသေချာရွေးခဲ့ပေမယ့် ကားပေါ်ရောက်တော့ လွတ်တဲ့နေရာထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့က လေးယောက်သွားတာဆိုတော့ နှစ်ယောက်တွဲစီထိုင်လိုက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်… ကားထွက်ထွက်ခြင်း တရားခွေဖွင့်ပေးထားပါတယ် … အနည်းငယ်ကြာတော့ သီချင်းခွေပြောင်းထည့်လိုက်ပါတယ် … ဖိုးချစ်နဲ့ သားစိုးတို့ရဲ့သီချင်း ခပ်မြူးမြူးလေးနားထောင်ရင်း အေးစက်နေတဲ့ကားထဲမှာ ကွေးကွေးလေးလိုက်ပြီး ခရီးသွားရတာ စိတ်ထဲမှာပျော်နေမိပါတယ်။
ချမ်းတာကလဲ အတော့်ကိုချမ်းပါတယ် .. ကျွန်မတို့ ကျိုက်ထီးရိုးသွားချိန်မှာ ရန်ကုန်မှာရော ကျိုက်ထီးရိုးမှာပါ အအေးတော်တော်သည်းပါတယ်။ မနက်(၃)နာရီလောက်မှာ ကင်ပွန်းစခန်းကိုရောက်ပြီး ရင်ရင်ပြုံးထမင်းဆိုင်မှာ ခဏတာတည်းခိုကြပါတယ် … နောက်နေ့မနက်(၈)နာရီလောက်ထပြီး တောင်ပေါ်တက်မယ့်ကားတွေနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ် …. နောက်ဆုံးခုံမှာထိုင်လိုက်ရတော့ အသည်းတယားယားနဲ့ပဲ အကွေ့၊ အ၀ိုက်၊ အမြင့်၊ အမောက်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်လမ်းအလှကိုခံစားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပေါ်ရောက်တော့သုံးထပ်ဆောင်မှာပဲတည်းဖြစ်ပါတယ် … အဆောင်က ရင်ပြင်တော်အောက်ဘက်တင်ဆိုတော့ ဘုရားဖူးရနီးနီးနားနားဖြစ်တယ်လေ …. ကျွန်မတို့သွားတာ ကြာသပတေးနေ့ည ဆိုတော့ နောက်နေ့တွေမှာ လာလိုက်တဲ့ဘုရားဖူးတွေဆိုတာ မနည်းမနောပါပဲ …
ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ ဆီမီး(၅၀၀၀)၊ပန်း(၅၀၀၀) ပွဲနဲ့လဲတိုးတော့ ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေ လည်းတိုးမပေါက်အောင် များနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ထူးပါဖူးမည် ပန်းစေတီ” ဆိုတဲ့ စာသားကို ပန်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားကြပြီး ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ပုံကိုလဲ ပန်းတွေနဲ့ပဲ ပုံဖော်ထားတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ (ပုံတွေတင်ပေးချင်ပေမယ့်လည်း ကျွန်မပုံပါ ပါနေတော့ သူငယ်ချင်းတွေလန့်ကုန်မှာစိုးလို့ မတင်တော့ပါဘူးနော)
ကျွန်မ တောင်ပေါ်မှာ နှစ်ညအိပ်ပါတယ် … အပြန်လမ်းကိုတော့ ရသေ့တောင်အထိ ခြေလျင်ဆင်းပါတယ် … မပြန်ခင်တစ်ညအလိုက မုဆိုးတောင်ဘက်သွားတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေရှိတဲ့ဘက်ရဲ့လမ်းမှာ နတ်ကနားပေးဖို့ လမ်းပြည့်လုနီးပါးထိုးထားတဲ့ မဏ္ဍပ် ကိုသွား ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် … နတ်ကနားပွဲက မထူးဆန်းပေမယ့် တွေးစရာ၊မေးစရာလေးတွေရှိလို့ ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပါဦးမယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:46 PM7comments Links to this post
အပေါ်ကပုံလေးတွေက ငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေပါ .... ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တုန်းက စာအုပ်ဘီဒိုဖွရင်း ပြန်တွေ့လို့(အမှန်က အများကြီးဆွဲဖူးတယ်) စကင်လုပ်၊ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းဆီပို့ပေး၊ သူငယ်ချင်းက Photoshop နဲ့ စာရွက်အသားဝါနေတာတွေဖယ်ထားပေးတာပါ ...
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:46 AM 11 comments Links to this post
ဇန်န၀ါရီ(၁၀)ရက်နေ့က ကျွန်မ ရန်ကုန်ခဏပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …. အစစ အရာရာချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ …… ကျွန်မက အိမ်လွမ်းတတ်သူမို့ ခဏပြန်ရတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်လေးတော့ပျော်ခဲ့ရပါတယ် ….
ကျွန်မရောက်ရောက်ချင်းနေ့မှာပဲ ချိန်းထားတာတစ်ခုရှိလို့ ဒဂုံစင်တာရှေ့က Ice Berry ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်…. ဆိုင်လေးကတော့အရင်အတိုင်းပဲ ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး … ဒါပေမယ့် အရင်က အေးအေးလူလူထိုင်လို့ရတဲ့ဆိုင်လေးက ခုတော့မျက်စိနောက်လောက်အောင် လူအ၀င်အထွက်တွေရှုပ်လွန်းလှပါတယ် … ကျွန်မလည်း ချိန်းထားတာကိုစောင့်ရင်း လူတွေကို ဘာရယ်မဟုတ်လိုက်ကြည့်နေမိပါတယ် … လူငယ်တွေဝတ်တတ်၊စားတတ်လာသလို လူကြီး(အမျိုးသမီးကြီး)တွေကိုလဲ စကပ်တွေ၊ဘောင်းဘီတွေနဲ့တွေ့မိပါတယ် … စိတ်ထဲကတော့ “အလဲ့ … လူတွေ ၀တ်တာစားတာ တော်တော်ခေတ်မီလာပါလား” လို့တွေးမိတယ် …
နောက်တော့ စမ်းချောင်းထဲက “မငယ်” ဆိုင်မှာ ကြာဇံနဲ့ဝက်သားလိပ်စားပါတယ် ….
ပိုက်ဆံရှင်းတော့ တစ်ပွဲကို ၂၀၀၀ တဲ့ …. ကျွန်မ တကယ်ကိုမထင်မိဘူး …. ဈေးကြီးလိုက်တာလို့ စိတ်ထဲထင်မိတယ် ….နောက်နေ့ YKKO မှာ ကြေးအိုးစားတော့ ရိုးရိုးကိုပဲ ၂၉၀၀ တောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်(တခြားဆိုင်မှာ ၂၁၀၀ ပဲရှိပါတယ်) … ၀က်သားဒုတ်ထိုးကတော့ တစ်ချောင်း ၁၀၀ ပါပဲ … ဒါပေမယ့် အသားတုံးလေးတွေကတော့ ပိုပါးပြီးသေးသွားသလားပဲရယ် …. တနင်္လာနေ့ကျတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားကိုသွားပါတယ် … ဒီတခါတော့ ဘုရားပေါ်မှာ တံမြက်စည်းမလှဲခဲ့လိုက်ရဘူး ….
စကားမစပ် … ကျွန်မတို့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေများလာသလို ၈တန်း၊ ၉တန်း ကျောင်းသား၊သူလေးတွေက အားတာနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုပြေးတော့တာပဲ …
ကျွန်မတူမ၀မ်းကွဲလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ …. အသက်ကတော့ ၁၄ နှစ်ရယ် … ပြောလိုက်ရင် ပန့်ခ်၊ပန့်ခ် ဆိုတာကလဲပါးစပ်ကမချဘူး … အကောင့်ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ချတ်မယ်ဆိုရင်လာခဲ့ စာတော့မကျက်ဆိုတဲ့အစားမျိုးလေးတွေ့ရတာတော့ ဘ၀င်မကျမိတာအမှန်ပါ …. ပြီးတော့ ခုခေတ်ကလေးတွေ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေပေါ့ ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး အတုမယူသင့်တဲ့ ကျောင်းသူချင်း ရန်စတာတို့ ဘာတို့ကို အဟုတ်ထင် လိုက်လုပ်ချင်ကြတယ် … ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ကြတာပါ …ခုတော့ကျွန်မပဲ သိပ်အသက်ကြီးသွားသလားပဲရယ် … အဲ့လိုတွေမြင်ရ ကြားရရင် သိပ်ကြည့်မရချင်ဘူး …
ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ မီးကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ … ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်မှာတော့ ပုံစံ(၃)မျိုးနဲ့မီးပေးပါတယ်တဲ့ … ည(၁၁) နာရီကနေ မနက်(၅)နာရီ၊ ညနေ(၅)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီ၊ တခါတလေ မနက်(၅)နာရီကနေ နေ့လည်(၁၁)နာရီထိ အလှည့်ကျပေးပါတယ် .. ပုံစံ(၁)နဲ့(၂)က အပေါ်ကအချိန်တွေကို လှည့်ပြီှးမှန်မှန်လာပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက တော့ရောသမမွှေပြီး လာချင်တဲ့ရက်လာ ပျက်ချင်တဲ့ရက်ပျက်ပါတယ် …. ရ၀တရုံးမှာ မီးလာရက်အချိန်ဇယားထုတ်ပေးလို့ ယူသာထားရတယ် ကျွန်မတို့အိမ်က ပုံစံ(၃)နဲ့မီးပေးတဲ့ထဲမှာပါလို့ မှန်းလို့မရပါဘူး …
ခုဟာက (၂၄) နာရီတစ်ရက်မဟုတ်ပဲ (၆)နာရီတစ်ရက်ဖြစ်နေတော့ မီးလာမှလုပ်လို့ရမယ့်အလုပ်တွေဆိုရင် အကုန်နှောင့်နှေးပြီး တစ်နေ့ တစ်နေ့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့အချိန်ဘယ်လိုလေးကုန်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးရယ် …
အော … နောက်တစ်ခုထပ်ကြုံလို့ပြောရဦးမယ် … ကျွန်မတို့မျက်စောင်းထိုးမှာ စက်ရုံအသေးစားလေးတစ်ခုရှိတယ် … သူတို့က မီးမလာတော့မီးစက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့ .. မီးစက်က မီးလန့်တာလေ သိပ်တော့မကြီးပါဘူး … ဒါပေမယ့် မီးဆိုတာကလဲ သေးတယ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးပေါ့လို့မှမရတာနော …. ချက်ခြင်းကို ကားကြီးတစ်စင်းစိုက်လာပြီး ရ၀တတွေ၊ ရပ်ကွက်ထဲကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ မြို့နယ်ရဲတွေ ချက်ခြင်းရောက်လာပါရောလား … ကျွန်မဖြင့်အံ့တွေသြလို့ …. အဲ့လိုချက်ခြင်းရောက်လာတာမျိုးမကြုံဖူးဘူးလေ … ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်မှာ အရင်တုန်းက လူသတ်မှု့တစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ် …. ရဲတွေတော့လာကြပါတယ် … သတ်နေတာကိုလဲ ကြားနေရတယ် … အိမ်ထဲမ၀င်ဘူးတော့ … ဘာကိုစောင့်နေသလဲတော့မသိဘူးရယ် … ထွက်ပြေးမှ လိုက်ဖမ်းတာမျိုးတွေချည်းပဲတွေ့ဖူးတော့လေ …. ခုလိုမီးလန့်တာကို ချက်ခြင်းကြီးရောက်ချလာတာ ကျွန်မလေ တကယ်ပါ တကယ်အံ့သြတာသိလား … ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး … ကြုံလို့ပါ ….
ပြီးတော့ ကျွန်မ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးရောက်ဖြစ်တယ် …. နောက်မှ ကျိုက်ထီးရိုးဖီလင်ကိုရေးပါမယ် …. ဆက်ရန်ပေါ့နော …
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:50 AM5comments Links to this post